IOS inoshanda sisitimu | Nhau dzePhone (Peji 4)
iOS 13 yaigona kuwedzera rutsigiro rwemouse pane iyo iPad
Zvinoenderana nemunyori anozivikanwa Federico Viticci, iOS 13 inogona kuwedzera rutsigiro rwegonzo kana iyo TrackPad.
iOS 13 ichatiunzira Animojis nyowani: mhou, octopus, mbeva, uye chiso chemoji
Apple iri kugadzirira kuvhura Animojis nyowani pakati yatingawana Mickey Mouse nechiso cheEmoji chinochinja nematauriro edu.
Beta yechitatu yeIOS 12.3, tvOS 12.3 uye watchOS 5.2.1 yevagadziri yave kuwanikwa
Vakomana vanobva kuCupertino vatanga michina ye beta uye kwemaawa mashoma, zvave ...
Ipfupi, Screen Nguva uye zvimwe iOS maficha anouya ku macOS 10.15
macOS 10.15 ichakwereta yakanaka shoma yezvinhu izvozvi zvakachengeterwa iOS, senge Siri Pfupi uye Screen Nguva, pakati pevamwe.
Apple ine nzira yekuda kuziva yekuratidza chimiro chemaapplication atakaisa pakombuta yedu kuburikidza nezviratidzo.
Kubuda kwekutanga kunoonekwa nezve nhau dzinozoonekwa muIOS 13, vhezheni yakanyanya kutarisana nekuvandudzwa kweiyo iPad
Izvo hazvichakwanise kudzikisira kune iOS 12.1.4
Apple maseva amira kusaina iyo iOS 12.1.4 vhezheni, saka isu tinogona chete kudzikisira kune iyo vhezheni yakasainwa naIOS 12.2
Beta yekutanga yeIOS 12.3 yevagadziri yave kuwanikwa
Apple maseva anga akamuka uye achimhanya zvakare kuvhura betas, iOS uye tvOS betas kanenge ...
IOS 12.2 ikozvino yave kuwanikwa neApple News +, new animojis uye nezvimwe zvakawanda
Iwo maminetsi mashoma apfuura, iyo mharidzo iyo Apple yanga yakaronga kuendesa zviri pamutemo basa rayo re ...
Isu tinotsanangura maitiro ekugadzirisa uye maneja chero AirPlay 2 mutauri kuti uitonge kuburikidza naSiri uye toshandisa izwi redu kuburitsa zvirimo
IOS 6 Beta 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2, uye tvOS 12.2 yevanogadzira
Apple inoburitsa ese ekuvandudza beta 6 shanduro dzeIOS 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2, uye tvOS 12.2
Apple inoburitsa Beta 5 yeIOS 12.2, watchOS 5.2 uye tvOS 12.2
Apple ichangoburitsa iyo yechishanu beta yeIOS 12.2, tvOS 12.2 uye watchOS 5.2, ayo anotevera ekuvandudzwa emidziyo nhare, smartwatch uye Apple TV.
Vakomana vanobva kuCupertino vari zvekare kutikanda dambudziko padanho reZuva reMarudzi reVakadzi, menduru nyowani yatinogona kuwana nekurovedza muviri.
Léo Vallet akaburitsa pfungwa nyowani yeIOS 13. Ino nguva anotarisa pakushandisa kunogona kupihwa iyo iPad mune ino nharaunda.
Vagadziri ikozvino vava kukwanisa kupa zvimwe zvinopihwa pane kunyorera
Kumwe kwekuvandudza kwatakaona mukunyorera kweApp Store mumakore achangopfuura kwave kuri ...
Iyo beta vhezheni 3 yeIOS 12.2 yakaburitswa neApple maawa mashoma apfuura inoita iyo FaceTime boka kudana basa zvakare
Apple inotangisa Betas nyowani yeIOS 12.2, watchOS 5.2 uye tvOS 12.2
Apple inoburitsa yechitatu Betas yeIOs 12.2, watchOS 5.2 uye tvOS 12.2 ine kugadzikana kwekusimudzira uye kugadzirisa bug kubva kumagadzirirwo apfuura.
Boka Facetime richiri kunetseka mushure mechigamba
Kutanga kwe2019 yeApple kwakaratidzirwa nechengetedzo kukanganisa kweGroup FaceTime iyo yakabata ...
Pfungwa iyi yeIOS 13 inoratidza zvese zvinogona kuve neIOS
Mune ino pfungwa yeIOS 13 tinoona anopfuura makumi mana emabasa matsva anogona kuunzwa kuWWDC 40 pamwe nemamwe masisitimu anoshanda.
iOS 12.1.4 Inoisa maviri Mazuva-Mazuva Njodzi, Kwete Ingo FaceTime Boka Kufona Kuchengetedzwa
iOS 12.1.4 haisi kungogadzirisa nyaya dzeKufona kweBoka kuburikidza neFaceTime, asi yakagadzirisa zvekare kushushikana kwemazuva maviri.
Apple Inoburitsa iOS 12.1.4 kugadzirisa FaceTime Bug
Apple yakaburitsa iOS 12.1.4, iyo vhezheni inogadzirisa iyo FaceTime chengetedzo kukanganisa iyo yakabvumidza mumwe munhu kuti "atisora" isu
Apple inomira kusaina iOS 12.1.1 uye iOS 12.1.2 mushure mekuburitsa iOS 12.1.3
Shanduro dzeIOS 12.1.1 uye iOS 12.1.2 hadzichawanikwe pamaseva eApple kuti aenderere mberi nesiginecha yavo, iine iOS 12.1.3 iri iro rega vhezheni iro Apple rinosaina nhasi.
Mutsva kupa kweiyo iPhone ine matatu makamera uye yakasviba modhi mune iOS 13
Shanduro nyowani yeiyo iPhone iyo Apple ichazopa gore rino neruzivo izvo zvinotiratidza maitiro erima ramangwana iOS 13
iOS 12.2 inokutendera iwe kudzikisira kushandiswa kweiyo gyroscope yeSafari uye accelerometer yezvikonzero zvakavanzika
Iyo inotevera iOS yekuvandudza, nhamba 12.2, ichatibvumidza kudzima kupinda kuburikidza neSafari kune ese magyroscope uye iyo accelerometer.
Beta yechipiri yeIOS 12.2, watchOS 5.2 uye tvOS 12.2 yave kuwanikwa
Vakomana vanobva kuCupertino vangoburitsa beta rechipiri reIOS 12.2 uye mamwe masisitimu anoshanda ari kushanda nekambani.
Huwandu hukuru hwezvigadzirwa hunosara pasina kugamuchira iOS 13 zvinoenderana nerunyoro rwekuenderana runyorwa
iOS 13 ichave ichazoburitswa paWWDC 2019 muna Chikumi. Zvinoenderana…
iOS 13 ine Dark Mode, iPhone ine Triple Kamera uye USB-C ye2019
Bloomberg inotipa ruzivo nezvezvirongwa zveApple zve2019 ne2020, ichisimbisa katatu kamera uye shanduko dzakakosha muIOS 13
Yakakomba FaceTime glitch inokutendera kuti unzwiwe usingabvume kufona
Zvaiita kunge iOS 12 yaizotiza pasina chakakomba chengetedzo chikanganiso, asi haina kuramba uye ine ...
Aya ndiwo maitiro aunodzora TV kubva kuKeKKit neIOS 12.2
Isu takaedza iyo nyowani iOS 12.2 ficha iyo inoita kuti iwe udzore maTV kuburikidza neKeanKit uye Siri, uchitsanangura zvatingaite uye zvatisingakwanise kuita
Iyo Cupertino kambani ichangoburitsa iOS 12.1 mune yayo yekutanga Ruzhinji Beta kuitira kuti chero mushandisi agone kufadza vashandisi.
Apple inotangisa yekutanga Beta yeIOS 12.2 uye watchOS 5.2
Apple inotanga beta kutenderera zvakare neshanduro nyowani iOS 12.2 uye watchOS 5.2, pamwe neTVOS 12.2 uye macOS 10.14.4
Apple inoburitsa vhezheni dzekupedzisira dzeIOS 12.1.3, macOS Mojave 10.14.3, watchOS 5.1.3, uye tvOS 12.1.2
Mutsva wekuburitsa masikati kune vese vashandisi veApple nekusunungurwa kweIOS 12.1.3, macOS Mojave 10.14.3, watchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2
Beta yechina yeIOS 12.1.3 ikozvino inowanikwa kune vanogadzira uye vashandisi veveruzhinji beta
Apple ichangoburitsa iyo yechina beta yevanogadzira uye vashandisi veiyo iOS 12.1.3 yeruzhinji beta chirongwa
Iko kushanya kwemidziyo ine iOS 13 kwakawedzera mumwedzi ichangopfuura, mune makuru Apple media mawebhusaiti.
iOS 12 inowanikwa pane matatu kunze kweana zvishandiso
Kana mwedzi mina yapfuura kubva kuburitswa kweIOS 4, iyo yazvino vhezheni yeIOS inowanikwa pane matatu kubva kumana mana akatsigirwa.
Apple inoburitsa yechipiri vhezheni yeazvino iOS 12.1.2
Vakomana vanobva kuCupertino vanoshamisika nekuburitsa nyowani nyowani yeIOS 12.1.2 iyo inogadzirisa zvidiki zvipembenene uye inodzivirira kuburitsa nyowani iOS 12.1.3.
Beta yekutanga yeIOS 12.1.3 yave kuwanikwa kune vanogadzira (Yakagadziridzwa beta 2)
Beta yekutanga yeIOS 12.1.3 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
Apple inomira kusaina iOS 12.1 zuva rimwe mushure mekuburitsa iOS 12.1.2
Apple maseva amira kusaina iOS 12.1, saka tinogona chete kuisa iOS 12.1.1 uye 12.1.2 pane edu zvishandiso, iyo yakaburitswa maawa makumi maviri apfuura.
iOS 12.1.2 yakaburitswa chete maPhones
Yekutanga beta iOS 12.1.2, watchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2 yave kuwanikwa
Iyo yekutanga beta yeIOS 12.1.2, warchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2 zvave kuwanikwa kune yekuvandudza nharaunda inotarisa mukuvandudza mashandiro.
iOS 12 inowanikwa pamakumi manomwe emidziyo inotsigirwa
Mwedzi mitatu mushure mekuburitswa, iOS 3 inowanikwa mu12% yezvinhu zvese zvinotsigirwa.
Apple haibvumiri nativeKit kuti itange nePodPod, asi tichishandisa mapfupi application tinogona kuigadzirisa.
Aya ndiwo maratidziro anoita Apple boka reFaceTime mafoni
Apple ichangotumira pane yayo YouTube chiteshi vhidhiyo yekutanga mairi iyo inosimudzira mapoka evhidhiyo mafoni kuburikidza neFaceTime.
Vakomana vanobva kuCupertino vamira kusaina vhezheni yapfuura yeIOS 12.1, iOS 12.0.1, saka hazvichakwanise kudzikisira pashanduro iyi.
Beta yechitatu yeIOS 12.1.1 uye tvOS 12.1.1 yevagadziri uye yechipiri yeWOSOS 5.1.2 yave kuwanikwa
Beta yechitatu yeiyo ichave inotevera iOS 12 yekuvandudza yatove mumaoko evanogadzira, pamwe neiyo yeOSOS neTVOS.
Zvinorevei chiratidzo cheICloud pamberi pezita rekushandisa chinoreva muIOS
Kana iwe wakagara uchinetseka kuti chii chinonzi iCloud chiratidzo nemuseve wezasi pamberi pekushandisa zvinoreva, muchinyorwa chino tichakuratidza zvarinoreva.
KeenLab yakatyora iyo nyowani iPhone XS Max muIOS 12.1
Idzi ndidzo nhau dzinosvika, pamwe nhasi, kubva muruoko rweIOS 12.1
Tichifunga huwandu hwemabheas akaburitsirwa iOS 12.1, iyo yekupedzisira vhezheni ingangoburitswa nhasi. Muchikamu chino tinokuratidza nhau dzese
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro atinga shandure maratidziro evanoonana nguva dzese dzatinowana iro bhuku renhare pane yedu iPhone kana iPad.
Apple yakamira kusaina iOS 12.0 kubvira nezuro Muvhuro
Iyo "beautygate" ichagadziriswa neIOS 12.1
Iyo Beautygate yave kusvika kumagumo ayo neyakagadziridzwa kuIOS 12.1 iyo inogadzirisa iyo bug ye "runako firita" painotora selfies
iOS 12.1 Beta 5 Zvino Inowanikwa kune Vagadziri
Apple ichangoburitsa iyo nyowani iOS 5 Beta 12.1, pamwe neiwatchOS 5.1 uye tvOS 12.1 yevagadziri, ine eSIM uye emoji nyowani.
Kana mudziyo wedu uchigara uine nzvimbo yakakwana yekuchengetera, zvinogona kunge zvichiziva kuti ndeipi nzvimbo yemahara yatave nayo, zvinotibvumidza kuronga zvirinani maapplication akaiswa.
Apple inoburitsa yechina beta yeIOS 12.1, watchOS 5.1 uye tvOS 12.1 yevanogadzira
Zvinoenderana neyakavanzika Apple data, iOS 12 yatove mu50% yemidziyo inoenderana
Iyo yegumi nembiri vhezheni yeIOS 12 yatove kuiswa zviri pamutemo pa50% yezvinhu zvinoenderana.
Apple inoburitsa iOS 12.1 Beta 3 padivi pewatchOS 5.1 uye tvOS 12.1
Apple yakaburitsa iOs 12.1 Beta 3, imwe bvunzo vhezheni yeiyi inotevera yekuvandudza iyo inosanganisira zvimwe zvezvinhu zvitsva zvatoratidzwa.
Vakomana vanobva kuCupertino vamira kusaina iOS 11.4.1, yazvino vhezheni yeIOS 11 yakaburitswa naApple pamberi peIOS 12.
Iye anozivikanwa wekubira Luca Todesco angadai akakwanisa zvakare kupaza jeri chishandiso cheApple, mune iyi nyowani iPhone XS Max.
IOS 13 pfungwa: home screen widget, dark mode uye kuzivisa patsva
Mwaka wemifungo unotanga. Pane ino chiitiko, iyo pfungwa yeIOS 13 inounzwa ine yakasviba modhi uye yakazara kugadziriswazve kwezviziviso.
iOS 12 inoenderera mberi nekukura kwayo nechisimba danho
Iwo anopfuura makumi manomwe emoji nyowani anosvika aine iOS 70
Isu tatova neyechipiri beta yevanogadzira iOS 12.1, watchOS 5.1 uye tvOS 12.1
Vana vakatokwanisa kudarika maairtime airtime
Zvizvarwa zvitsva zviri kuuya zvine simba uye hazvina kukundikana kuwana nzira yekudarika zvinorambidzwa nevabereki.
MacX MediaTrans, imwe nzira yeTunes iyo iwe yaunogona ikozvino kuedza mahara
MacX MediaTrans inotipa iri nyore uye inokurumidza imwe nzira kune iTunes, ine mabasa akadai sekugadzira mheremhere kana kuendesa mafaera.
Mashandisiro ekushandisa iyo iOS 12 Measurements app
Iyo Measurements app yakaiswa pane yako iPhone ne iOS 12 uye ichakubatsira iwe kuyera zvinhu zviri munharaunda yako. Tinotsanangura maitiro kuzviita.
Kana iwe uchifunga kuti nguva yasvika yekusiya iOS yeruzhinji beta chirongwa, mune ino chinyorwa tinokuratidza maitiro ekuzviita nekukurumidza.
Isu tinotsanangura kuti tingaite sei ma ringtone e iPhone yedu uye kuapfuudza kwairi nyore, mumaminetsi mashoma uye zvakare, mahara.
Maitiro ekuona yakavanzwa iOS 12 Weather widget
iOS 12 inosanganisira widget yakavanzwa inoti mangwanani akanaka nemamiriro ekunze, tinotsanangura maitiro ekuishandisa
Kugamuchirwa kweIOS 12 kunononoka kupfuura shanduro dzekare
Iyo yegumi nembiri vhezheni yeIOS, maawa makumi mana mushure mekuwanikwa pachena, yave kuwanikwa pa48% yezvigadzirwa zvinotsigirwa
iOS 12.1 inogona kutiunzira kuwiriranisa kweMemoji pakati pemidziyo yedu
iOS 12.1 inogona kutiunzira kuenderana kwakamirirwa kwenguva refu kweMemoji nyowani pakati pemidziyo yedu yese nekuda kweICloud.
iOS 12.1 Beta 1 inosanganisira Boka FaceTime kufona uye yakatwasuka Chiso ID
Yekutanga Beta yeIOS 12.1 inosanganisira zvitsva zvinhu zvakaita seboka zvinodaidza FaceTIme uye inogona iPad Pro ine rutsigiro rweFace ID yakatwasuka.
Apple inoburitsa iOS 12.1, watchOS 5.1 uye tvOS 12.1 betas yevanogadzira
Apple yakangoita iOS 12.1 beta 1 uye watchOS 5.1 beta 1 inowanikwa kune vanogadzira, pamwe neTVOS 12.1 yeApple TV.
iOS 12 ikozvino yave kuwanikwa kurodha pasi nekugadzirisa zvishandiso zvako
iOS 12 yave kuwanikwa kurodha pasi mushure memwedzi yekuyedzwa. Gadziridza yako iPhone uye iPad kune yazvino vhezheni kubva zvino zvichienda mberi.
Apple yave kuda kuvhura iOS 12 uye isu tinotsanangura zvese kana izvo zvaunoda kuti uzive usati wagadzirisa zvese zvako zvishandiso.
Semazuva ese, zvimwe zvezvinhu zvitsva muIOS 12 hazvizowanikwe pane ese mamodheru anoenderana neyazvino vhezheni yeIOS.
Idzi ndidzo dzese nhau dzinosvika neIOS 12
Tinokuunzira iyo yakasarudzika rondedzero ine dzese nhau dzinosvika neIOS 12 munaGunyana 17 kuitira kuti ugozviziva kwazvo.
Muvhuro unotevera, Gunyana 17, tichava neIOS 12 iripo, macOS Mojave 24
Munguva yemazuva ano Keynote, vakomana vanobva kuCupertino vanozivisa mazuva epamutemo eesisitimu nyowani dzekushandisa kwese zvishandiso.
Apple Inoburitsa iOS 12 GM Rimwe Svondo Isati Yatanga Kutangisa
Nguva pfupi yapfuura Keynote Apple yaburitsa iyo iOS 12 GM, iyo yakafanana vhezheni kune yepamutemo iyo ichaburitswa svondo rinouya.
Apple yatanga kusimudzira iOS 12 kuburikidza neTips app
Vakomana vanobva kuCupertino vanotanga kukwidziridzwa kweiyo nyowani iOS 12 nekuvhura zviziviso kuburikidza neTips app yenhau dzese.
Iyo iOS ecosystem inotonga iyo US bhizinesi chikamu
Nhare mbozha dzave chishandiso chebasa, kunyanya kune avo vashandisi vasingashanyi kuhofisi. Kuve muUnited States, kushandiswa kweiyo iOS inoshanda sisitimu pakati pemakambani kwakwira kusvika pa79%, zviverengero zvinoramba zvichiwedzera gore rega.
Philips ajoina iyo iOS 12 nhau nekubatanidza Siri Mapfupi mune ayo Hue mababu
Mushure mekusvika kwepedyo kwemitsara mitsva yeSiri neIOS 12, vakomana vePhilips vanosimbisa kuti maHue bulbs avo anoenderana neichi chitsva.
Apple Inoburitsa iOS 12 Beta 12 kugadzirisa "Gadziridza Inowanikwa" Bug
Apple inoburitsa inogadziridza kuIOS 12 Beta inogadzirisa iyo bug muhwindo iyo yakaratidza kuti paive neyekuvandudza pasina chaipo chaipo.
Ko yako iPhone inoramba ichikuudza iwe kugadzirisa kune iOS 12 Beta? Hausi wega
Bhugi kubva kune ichangoburwa iOS 12 Beta inokonzeresa inosemesa chikwangwari ichikuudza iwe kuti uvandudzire kune imwe vhezheni itsva isipo inowanikwa kakawanda
Isu tinotsanangura mashandiro anoita CarPlay mushanduro nyowani ye iPhone ne iPad, iOS 12, tichishandisa mirairo yezwi uye kutonga kwepanyama.
Nyamavhuvhu 12 ichave chiitiko chekuratidzira cheiyo nyowani iPhone, sekureva redhiyo reFrance redhiyo Europe 1
Kunyangwe hazvo chiitiko chega chega chakaitwa neApple gore rese, tinoona mumwe neumwe wevaya vanotora chikamu muchiitiko zvakasununguka. Zvinoenderana nezvazvino zviziviso zvinosvika kubva kuFrance, chizvarwa chitsva che iPhone X chaigona kuona. mwenje unotevera Gunyana 12.
Apple Inoburitsa iOS 12 Beta 11 ye iPhone uye iPad
Apple inotangisa iyo nyowani beta 11 yeIOS 12, yechitatu muvhiki, yakabatana nema betas matsva eMacOS Mojave uye tvOS 12.
Kudzoka ne betas, Apple inotangisa beta 10 yevanogadzira uye 8 yeruzhinji
Tinogona kutaura kuti Apple kashoma inoenda kure zvakadaro neshanduro dze beta dzevagadziri nevashandisi vakanyoreswa ...
Ichitevera in-extremis kuburitswa yechisere beta vhezheni yeIOS 12 kugadzirisa matambudziko eiyo vhezheni yapfuura, Apple inoburitsa iOS 12 Beta 9.
Apple inobvisa iOS 12 Beta 7 nekuda kwekuita nyaya
Maawa mashoma mushure mekutanga iyo nyowani Beta 7 Apple yakaibvisa nekuda kwematambudziko ekuita uye kunonoka nekushandisa
Isu tinotsanangura mashandisiro echimwe chezvinhu zvitsva zveiyo iOS 12 iyo inobvumidza iwe kugovana mafoto nechero munhu pasina kurasikirwa nehunhu
Yekumhanyisa bvunzo yeIOS 12 beta 6 vs iOS 11.4.1
Vakomana vanobva kuCupertino vakaparura nezuro beta nyowani yeIOS 12, yechitanhatu yakanangana nevakagadziri pamwe neyechishanu yevashandisi ve beta Vakomana vanobva kuAppleBytes vanotiratidza mavhidhiyo maviri atinogona kuona kuti musiyano wekuita pakati peIOS 11.4.1 neIOS 12 Beta 6 pazasi.
Apple Inoburitsa 12th iOS XNUMX Developer Beta
Iyo inoshanda sisitimu ye iPhone ne iPad, iOS 12 ichangobva kuratidza beta yayo yechitanhatu kune vanogadzira uye idzi ndidzo nhau "dzinovanza".
Huwandu hwevashandisi kuyedza iyo iOS, macOS, watchOS uye tvOS betas inodarika zvese zvinotarisirwa nekambani
Vazhinji nevashandisi kuti nguva dzese Apple painoburitsa vhezheni nyowani yeIOS, ivo vaienda kuInternet kunotsvaga yekuvandudza iyo, Sekureva kwaTim Cook mazuva mashoma apfuura, huwandu hwevashandisi veruzhinji beta hwasvika mamirioni mana.
Idzi ndidzo bugs dzakagadziriswa uye izvo zvitsva zvinosvika muIOS 12 beta 5
Gara nesu uye uwane kuti ndeapi anga ari matambudziko akagadziriswa neiyi yechishanu beta yeIOS 12, uyezve ndeapi matsva okusvika
Apple Inoburitsa Nyowani iOS 12 Veruzhinji Beta ye iPhone nePad
Kutevera kuburitswa kwechishanu beta yevagadziri, Apple inoburitsa iOS 12 Beta 4 yeruzhinji kuti isu tese tigoedza iOS 12 pane edu maDevices.
iOS 12 Beta 5 inotitaridza mifananidzo mitsva yeiyo nyowani AirPods yekuchaja bhokisi
Bumbiro rakatorwa naApple mumakore achangopfuura ekuburitsa zvigadzirwa zvaro zvitsva mwedzi mishoma vasati vasvika muzvitoro, iri kukonzera kuti bhokisi rekuchaja risina waya rioneke zvakare mukodhi yeiyo yazvino beta beta yeIOS 12.
HomePod inosimbiswa kuti inokwanisa kufona
Mazuva mashoma apfuura zvakange zvatove zvisina kuziviswa nekutenda kune vanhu vaive nekwaniso kune yega beta iyo ...
iOS 12 beta 5 inosvika kuzoedza kugadzirisa matambudziko akakura eiyo vhezheni yapfuura
Mushure me19: 00 nguva yeSpanish, beta rechishanu reIOS 12 rakatangwa, pasina kupotsa musangano wako, kugadzirisa zvikanganiso zveiyo yapfuura vhezheni.
Iyo otomatiki inogadziridza yeIOS 12 ndeimwe yezvinhu zvitsva izvo iyo inotevera vhezheni yeIOS inotisvitsa isu. Tinokuratidza maitiro atinogona kumisikidza ivo kuti iPhone yedu igare ichigadziridzwa.
Iyo HomePod ichave nerutsigiro rwekufona uye mamwe mabasa neIOS 12
Iyo HomePod inogona kusanganisira zvinonakidza zvitsva maficha aya anowira padyo nekutanga kweIOS 12, senge kugona kwekufona.
Betas 4 yeIOS 12, tvOS 12 uye watchOS 5 inosvika
Apple yakaburitsa yechina Beta yeIOS 12 pamwe neiyo inoenderana Betas yewatchOS 5 uye tvOS 12, ayo ari kuwedzera kune macOS Mojave yakatangwa nezuro.
Mibvunzo inomuka nezve chengetedzo yeIOS 12 yekuchengetedza kiyi yekuzadza
Iyo Auto-Zadza basa kana auto-zadza yekuchengetedza makiyi muIOS 12 yakadyara kumwe kusahadzika kwekuchengeteka pakati pevanogadzira.
Iyo Shortcuts app yave kuwanikwa kune vanogadzira
Nhasi, Apple yaita kuti zviwanikwe kune vanogadzira (kana vanhu vane account yekuvandudza) kuwana iyo Shortcuts app kuburikidza neTestflight.
Yechipiri beta yeruzhinji yeIOS 12 ikozvino yave kuwanikwa
Iyo iOS 12 yeruzhinji beta chirongwa chakatangwa zvakare uye vakomana vanobva kuCupertino vatangisa yechipiri yeruzhinji beta
IOS 3, watchOS 12 uye tvOS 5 beta 12 ikozvino yavapo
Apple yaita kuti ive yechitatu beta yevanogadzira masystem ayo matsva eApple, iPad, Apple TV uye Apple Watch.
iOS 11 Ichiri Mupenyu: Apple Inoburitsa iOS 5 Beta 11.4.1
Apple inoenderera nekuvandudza iOS 11 uye macOS High Sierra nekusunungura iyo yechishanu beta yeIOS 11.4.1 uye macOS 10.13.6 yevagadziri nhasi.
Siri mapfupi kana maitiro ekudzora Spotify nezwi redu
MuIOS 12 maSiri mapfupi, chishandiso chaunokwanisa kuita zviito zvetsika nekungotaura nemubatsiri.
Iyo iOS 12 Veruzhinji Beta yave kuwanikwa
Iyo yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 12 yave kuwanikwa, kuti chero mushandisi ane inoenderana iPhone kana iPad anogona kuiisa uye kuyedza nhau dzayo pamberi peumwe munhu.
Beta yechina yeIOS 11.4.1, tvOS 11.4.1 uye yechitatu yeWOSOS 4.3.2 yave kuwanikwa
Kubva kumaseva eApple, ivo vaita kuti zviwanikwe kune vanogadzira beta yechina yeIOS 11.4.1 uye tvOS 11.4.1, kuwedzera kune yechitatu beta yeWOSOS 4.3.2
Nhau diki dzine chekuita nekusunungurwa kwemadhisiki muApple Music yeIOS 12
Iyo Apple Music sevhisi iri kuwedzera zvidimbu zvidiki uye nhau muIOS 12 uye macOS Mojave. Ino nguva, chikamu cheinouya album kuburitswa.
iOS 12 Beta 2 inosanganisira mareferenzi kune mhando nyowani dzeApple Watch
Iyo yechipiri beta yeIOS 12 yatiunzira imwezve kushamisika muchimiro chereferenzi. Iwo aive akavanzwa mukodhi yako uye anoreva kune nyowani Apple Watch
Shanduko dzese kubva kuIOS 12 Beta 2
Apple yakaburitsa iOS 12 Beta 2 uye tinokuratidza shanduko dzese nekuvandudza kwayakaisa mune ino nyowani yekuvandudza ye iPhone nePad
Iyo yechipiri beta yeIOS 12, watchOS 12, tvOS 12 uye macOS Mojave yava kuwanikwa kune vanogadzira
Apple yakangotanga mavhiki maviri mushure mekuburitsa yekutanga beta yevagadziri veIOS 12, yechipiri beta, zvakare yevanogadzira
ResearchKit 2.0, nyowani mushandisi interface uye mutsva mabasa
Ne iOS 12 ichauyawo itsva vhezheni yepuratifomu yekuvandudza ekushandisa ekutsvaga. Zviri nezve ResearchKit 2.0
GreyKey ine maawa akaverengwa, Apple yakatsunga kuibvisa
Kana iwe uri mumwe wevaya vanotevera nhau dzeApple uye iyo iPhone, iwe uchazoziva iyo GaryKey bhokisi rinotendera ...
Isu tinokuudza iwe zvekutanga kuratidzwa mushure mevhiki nemabetas akaunzwa naApple mune yekupedzisira yekutanga hurukuro yeWWDC 2018
Maitiro ekuisa "Kurara Mode" ku "Usakanganise" muIOS 12
Apple yakaenderera mberi nekuvandudza iyi "Usakanganise" maitiro neIOS 12 uye hutsva hukuru hwave hwekuwedzera iyo "Sleep mode" uye pano ini ndinotsanangura mashandisiro acho.
Aya ndiwo mapurogiramu anoita zvakanyanya pakuita beta yekutanga yeIOS 12
Aya ndiwo mashandiro anoita zvakanyanya muIOS 12 beta uye ari kukonzera matambudziko kumushandisi kana zvasvika pakuvamhanyisa neBeta 1.
Apple inoburitsa yechipiri beta yeIOS 11.4.1 yevagadziri
Mushure memavhiki maviri uye mushure mekuratidzwa kweIOS 12, Apple yakaburitsa yechipiri beta yeIOS 11.4.1 yevagadziri iyo yave kuwanikwa kurodha pasi.
Apple inovandudza inozivikanwa yekukanganisa system neFace ID muIOS 12
Na iOS 12, kana Chiso ID chikatadza, kuwana kodhi yekuvhura inokurumidza uye inotibvumidza kuikumbira nechiratidzo chimwe chete.
iOS 12 inovandudza manejimendi manejimendi
Neyekuvandudza kweIOS 12, mapassword e iPhone yedu ane chinhu chakavandudzwa uye zvichatibatsira kuve noutongi huri nani hwemapassword edu.
Izvo hazvichakwanise kudzikisira kune iOS 11.3.1
Iwo maseva e Cupertino amira kusaina iOS 11.3.1, saka hatichakwanise kudzikisira kutora mukana wekufungidzira kwejereya iri kuda kubuda.
iOS 12 inoremadza kupinda kuburikidza ne USB kana yedu iPhone isina kuvhurwa muawa
iOS 12 inotibvumidza kudzima kutaurirana neiyo iPhone kuburikidza nekubatana kwemheni, kudzivirira zvishandiso zvakaita seGrayKey kubva pakuwana yedu terminal.
Artist Profiles paApple Mimhanzi Batsirwa kubva kune Dhizaini Shanduko muIOS 12
Iyo yekutanga beta yevagadziri veIOS 12 inoratidza pane diki nhau muApple Music app. Mapepa emifananidzo anoratidza kudzoreredza kudiki kunoita kuti iwo awone zvakanyanya.
Uku Kusakanganisa uye Screen Nguva muIOS 12
Dzidza nezvenhau dzine chekuita Usakanganise senge yayo nyowani yerima modhi uye zvese zvine hukama neScreen Nguva izvo zvinokutendera iwe kuti uzive mashandisiro aunoita yako iPhone pane zuva nezuva.
iOS 12 inokupa iwe ruzivo rwese nezve kushandisa bhatiri
iOS 12 inotipa kugutsikana kutsva uye ruzivo rwunotibatsira kuti tizive kuti ndeapi mashandisirwo ari iwo anodonhedza bhatiri redu
iOS 12 inokutendera kuti iwe ugadzire software inogadziridza otomatiki
Chinhu chitsva chakawanikwa muIOS 12 iyo inobvumidza iwe kugadzirisa yako system software otomatiki Hazvizivikanwe kana kunyangwe kuzviita otomatiki, mushandisi aifanira kugamuchira imwe mhando yekuwedzera ziviso.
iOS 11 inowanikwa pa81% yezvigadzirwa
Iyo yekugashira share 9 mwedzi mushure mekumisikidzwa kwayo kwasvika 81% yemidziyo irikushanda parizvino pamusika uye inotungamirwa neIOS
Dhawunorodha iyo nyowani iOS 12 Wallpaper
Mune ino chinyorwa tinokuratidza maitiro ekurodha pasi iyo nyowani Wallpaper ichauya kubva kuIOS 12 uye iyo yataigona kuona kumusangano wekutanga weWWDC 2018.
Rarama Teerera iri kuuya kuAirPods muIOS 12
AirPods inogona kugamuchira chinhu chitsva chine chekuita nekuwanika kwevanhu vane hurema hwekunzwa: Rarama Teerera.
Yekumhanyisa bvunzo pakati peIOS 12 neIOS 11.4 pane iyo iPhone 5s uye iPhone 8
Rimwe zuva mushure mekutanga kweiyo beta yekutanga yeIOS 12, paYouTube tinogona kuwana enzaniso dzakasiyana pakati pekutanga beta yeIOS 12 uye yazvino vhezheni iyo Apple inoratidza yeIOS 11 pane iyo iPhone 5s uye iPhone 8.
Face ID muIOS 12 inobvumidza iwe kunyoresa kechipiri kutaridzika, kwete chechipiri kumeso
Chinhu chitsva muIOs 12 chinokutendera kuti unyore chimwe chimiro cheFace ID, pane kuwedzera chiso chechipiri kuvhura chishandiso.
Mushure mehurukuro hurukuro tinowongorora nhau dzese idzo Apple dzatiratidza paWWDC18, iine iOS 12 ichitungamira
IOS 12 Inoenderana Midziyo
Huwandu hwemidziyo inoenderana neIOS 11, yakawedzerwa panzvimbo pekuderedzwa sezvazvinoitika gore rega rega, kana zvimwe zvese.
Yakakura nyowani iOS 12 maficha Apple haana kutaura paWWDC18
Tinokuunzira dzese nhau dzeIOS 12 idzo Apple isina kukuudza, idzo dzisiri shoma uye zvakare dzakakodzera, senge nyowani nyowani yekuita uye yekodhi yekufungidzira.
Nhau dzese muIOS 12
Kana iwe uchida kuziva dzese nhau dzichauya kubva muruoko rweIOS 12, pazasi tinokuratidza nhau huru dzinobva kuruoko rwekupedzisira vhezheni yeIOS 12 munaGunyana.
FaceTime inobvumidza boka kufona uye inosanganisirwa mukati mameseji neIOS 12
iOS 12 inobvumidza boka revhidhiyo kufona uye ichanyatsobatanidzwa neAnimojis, Memojis uye Mamessage.
MeMoji, shanduka uve Animoji nekuda kweiyo nyowani iOS 12
iOS 12 ichatibvumidza kuve yedu yega Animoji nekuda kweMeMoji nyowani, mavara ane hupenyu ane chitarisiko chedu.
Google Mepu inouya kuCarPlay neIOS 12
Apple yakaratidza iOS 12 kuWWDC uye izere nenhau dzeiyi nyowani iPhone inoshanda sisitimu, ...
iOS 12 inotiunzira Usakanganise pandinenge Ndarara mode
Iyo yekusakanganisa mamiriro inovandudzwa nekuwedzera mukana wekuti isu tigadzirise zvinoenderana nemaawa atinorara otomatiki.
Mapoka ezaziso anosvika muIOS 12, pakupedzisira Apple inonzwisisa kukosha kwayo
Apple yakazonzwisisa kukosha kwekumisikidza zviyeuchidzo muNotification Center uye yakazvipa sechinhu chitsva icho iOS 12 ichaunza.
Siri mapfupi anosvika, iko kugona kubatanidza kunyorera kune akafanirwa mitsara
Siri anokura neIOS 12 ichitibvumidza kusevha mapfupi kuburikidza nemitsara kuitira kuti Siri itirangaridze neruzivo rwatakachengeta.
iOS 12 ichaenderana nemidziyo yakafanana neIOS 11
Hongu, iyo itsva iOS 12 ichaenderana nemidziyo yese iyo iOS 11 yaienderana nayo, iyo sisitimu inoshanda iyo yakawanda michina inowirirana nayo.
Mumakore achangopfuura, kushandiswa kwema Emoticons kwave kupfuura zvakajairika panguva iyoyo ...
Tevera kuratidzwa kweiyo iOS 12 rarama neActualidad iPhone
Apple inotitumira uyu Muvhuro iyo yayo nyowani iOS 12 pamwe nezvimwe zvese zvekuvandudzwa kwezvose zvishandiso paWWDC 2018 uye isu tichakuudza zvese zvirarame. Tevera kubva pano.
Pachave pasina MacBooks nyowani kana iPads paWWDC 2018
Apple haizounza Hardware nyowani paWWDC 2018, ichifanira kumirira kusvikira zhizha razoona iyo MacBook nyowani nePad.
Asingasviki vhiki musangano wekuvandudza usati wasvika paWWDC 2018 umo ...
Apple Inoburitsa Yekutanga Beta yeIOS 11.4.1 yeVagadziri
Maawa makumi maviri nemana chete mushure mekutanga kweIOS 24 ine AirPlay 11.4 uye mameseji muICloud sevanyengeri vakuru, Apple yatanga beta yekutanga yeIOS 2.
iOS 11.4 ikozvino yave kuwanikwa: AirPlay 2 uye mameseji muICloud main nhau
Iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.4 yave kuwanikwa kurodha pasi kuburikidza neApple maseva, iyo yekuvandudza iyo inotipa isu mbiri huru novelties.
Matsva matsva, zviziviso uye zvimwe shanduko mune ino pfungwa yeIOS 12 [vhidhiyo]
Pasina kupokana vashandisi vazhinji vanogutsikana neshanduro yazvino yeIOS, asi kune vamwe vazhinji vanoda shanduko dzakakosha ...
Iyi pfungwa yeIOS 12 inotipa iyo Notification Center iyo isu tese tinoda
Pfungwa nyowani inotipa Notification Center yeIOS 12 iyo inopfuura mumwe wedu yaizosaina nemaziso edu akavharirwa iPhone yedu
Apple inosimbisa WWDC 2018 chiitiko munaJune 4 na19: 00 pm
Apple ichangotumira kukoka kuvatori venhau ichisimbisa chiitiko chekutanga cheWWDC 2018 chaJune 4 anotevera na10: 00 yemuno nguva, 19:00 nguva yeSpanish.
iOS 11.4 beta 6 ikozvino inowanika kune vanogadzira
Kana zvese zvikaita sekunge zvinoratidza kuti vhiki ino vakomana veCupertino havangatange nyowani iOS beta, ye ...
Apple inotangisa iyo Betas 5 yeIOS 11.4 uye mamwe masisitimu
Apple yakaburitsa iOS 11.4 Beta 5 pamwe nedzimwe shanduro dzedzimwe mapuratifomu eiyo ecosystem, atove kuwanikwa kune vanogadzira.
Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kushandisa Steam Link uye Steam Vhidhiyo kubva kune yedu iOS chishandiso
Valve ichangobva kuzivisa kuti munguva pfupi yapfuura vashandisi veIOS (zvakare vashandisi veApple) vachakwanisa kushandisa kubva kumafoni efoni, chii…
Aya ndiwo makuru makuru eAroid P, uye ndinoda kuva navo muIOS 12
Android P inosanganisira dzimwe shanduko dzisiri kunyanya kutyora pasi asi dzinovandudza ruzivo rwevashandisi uye kuti vazhinji vedu vangasaina iOS 12
A Unicode bug inopaza iyo iOS iMessage application
Iyo inonyatso kuzivikanwa bug ine chiratidzo cheTelugu kubva kumavhiki mashoma apfuura inoita kunge iri kubereka izvozvi mune imwe emoticon ...
iOS 11.4 ichavhara kushandiswa kweGrayKey Bhokisi mushure memazuva manomwe
Nokuburitswa kweinotevera vhezheni yeIOS 11.4, Apple ichaunza chiitiko chitsva chinozovharira chiteshi chekutaurirana chemidziyo neiyo vhezheni yeIOS, kana iyo terminal isina kuvhurwa muvhiki.
Apple inoburitsa iOS 11.4 Beta 4 pamwe nemamwe maBetas emacOS, tvOS uye watchOS
Apple yakaburitsa beta yechina yeIO 11.4, vhezheni inogona kuunza zvimwe zvezvipikirwa zvisati zvazadziswa naApple kubva muna Chikumi apfuura.
Apple iri kubhadhara zvimwe zvitoro kuti ipe zvakasarudzika zvemukati paApple News
Iyo nhau chikuva Apple News, inoda kuve bhenji yekumusoro yeiyo cheki bhuku uye yatanga kubhadhara vaparidzi vakasiyana-siyana kuti varatidze zvakasarudzika zvemukati.
iOS 13 ichaunza zvinhu zvitsva zvinotarisana neiyo iPad
iOS 13 ichaunza nhau dzakakosha, kunyanya zvine chekuita neiyo iPad, seyakavandudzwa Mafaira ekushandisa aine tabo
Apple inomira kusaina iOS 11.3
Vakomana vanobva kuCupertino vamira kusaina iOS 11.3, saka kana tiine dambudziko nechishandiso chedu, tinogona kungodzikisira kuIOS 11.3.1
Apple inoburitsa iOS 11.4 Beta 3 pamwe nemamwe mabetas ewatchOS, tvOS uye macOS
Apple yakaburitsa iOS 11.4 Beta 3 pamwe nemamwe maBetas emamwe mapuratifomu eApple, anowanikwa chete kune vanogadzira.
iOS 12 iri kutotanga kuoneka pa internet yeWWDC
WWDC iri kuswedera, saka isu tichaedza iOS 12 iyo yemberi vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu iyo ichavhurwa muna Chikunguru asi izvo zviri kutoonekwa pa internet.
iOS 11.4 Beta 2 yave kuwanikwa padhuze neOSOS 4.3.1 Beta 2 uye tvOS 11.4 Beta 2
Apple yakaburitsa yechipiri yekuyedza vhezheni yayo mitsva vhezheni yeIOS, tvOS uye watchOS yevagadziri, vhiki mbiri mushure mekutanga vhezheni.
Iyi pfungwa inoratidza minimalist uye inogadziriswazve iOS 12
Pfungwa iyi yeIOS 12 inoratidza minimalist system uko zviziviso zvinoramba zviripo pakuki uye mamwe maapplication senge zviyeuchidzo uye Siri interface yakagadzirwazve, mukuwedzera pakusanganisa boka reFaceTime.
Vakomana vanobva kuCupertino varega kusaina iOS 11.2.6, saka, sarudzo yega kana uchidzorera yedu iPhone, iPad kana iPod touch ndeyekuisa iOS 11.3.
Beta yekutanga yeruzhinji yeIOS 11.4 uye tvOS 11.4 yave kuwanikwa
Iyo yekutanga yeruzhinji beta yeinotevera huru iOS yekuvandudza yave kuwanikwa kurodha pasi nevashandisi vese vari chikamu cheiyo beta chirongwa.
Apple Inoburitsa Yekutanga Beta yeIOS 11.4 yeVagadziri
Apple ichangobva kuburitsa iOS 11.4 Beta 1, yevagadziri chete panguva ino, mazuva mashoma mushure mekuburitsa iOS 11.3 kune vese vashandisi.
Kufananidza kwehupenyu hwebhatiri muIOS 11.3 vs iOS 11.2.6 muvhidhiyo
Kutevera kuvandudzwa kwebhatiri kweApple uye iOS 11.3 kugadzirisa ne "Bhatiri Hutano", tsvaga kuti bhatiri rinoita nani kana kuwedzeredza pane mashanu iPhone mamodheru mushure mekuisa iOS 11.3.
Apple ichatibvumidza kuti tizive kuti ndeapi data muzvitoro zvedu, kugadzirisa uye kudzima
Apple inogadzirira webhusaiti kwatinogona kuziva yedu yese data yakachengetwa, kuigadzirisa kana kutomboibvisa zvachose
Apple inoburitsa iOS 11.3 uye zvimwe zvese zvekuvandudza, kusanganisira imwe yeiyo HomePod
Apple yakazoburitsa iOS 11.3 kune ese akatsigira iPhones uye iPads, pamwe nekugadziridzwa kweApple TV, Apple Watch, Mac, uye HomePod.
Apple inoburitsa iOS 11.3, asi chete iyo nyowani iPad
Mushure memavhiki ekuyedza Apple yakaburitsa iOS 11.3 asi chete iyo nyowani iPad 2018 isingakwanise kutengwa muzvitoro parizvino.
Apple inosimudzira Apple Kubhadhara Cash nechiziviso chitsva ichi
Chiziviso chitsva kubva kuApple chinotiratidza kuti zvinokurumidza sei uye zviri nyore sei kubhadhara uchishandisa Apple Kubhadhara Cash, yaro meseji yekubhadhara meseji.
Maitiro ekumisikidza uye kushandisa yako iPhone yekurapa data
Chiremba data inowanikwa neyakavharwa iPhone uye inogona kuve yakakosha mune emergency. Dzidza maitiro ekuvazadza iwo nedzidziso iyi.
9 × 25 podcast: Apple inozivisa WWDC 2018
Apple yakazivisa chiitiko chayo chemwedzi waJune, WWDC 2018 umo ichaburitsa nhau dzeIOS 12, macOS 10.14 uye mamwe mapuratifomu ekambani.
Apple inozivisa iyo WWDC, Apple Worldwide Vagadziri Musangano. Ichaitika muSan Jose, California, kuMcEnery Convention Center (iyo imwecheteyo kokorodzano yegore rapfuura) kubva Muvhuro, Chikumi 4, kusvika Chishanu, Chikumi 8, 2018. Keynote yekutanga inotarisirwa neMuvhuro, Chikumi 4.
Iyo yekumirira inoenderera: Apple inoburitsa iOS 11.3 Beta 5
Apple inotangisa yechishanu Beta yeIOS 11.3 apo vazhinji vedu tanga tichitotarisira vhezheni yekupedzisira yevashandisi vese, saka mirira inoenderera.
IOS 12 vhidhiyo pfungwa ine refu-yakamirirwa rima theme
Isu tinokuratidza iyo yekutanga pfungwa yekuti iyo yegumi nembiri vhezheni yeApple's inoshanda sisitimu yemidziyo nhare inogona kuita senge, zano iro rinomira kunze pakupa rima theme uye kudzoka kwekuvhara kuyerera.
Iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.3, kana yasvika pamusika, inogona kuunza nhau kuvashandisi veBrazil, sezvo vachizokwanisa kushandisa iyo TV application, iko kunyorera kwatinogona kubvunza hurongwa uye zvemukati zvakasiyana zvakabvumiranwa zvekushambadzira masevhisi. .
Imwe yezvinhu zvitsva zveiyo beta yechina yeIOS 11.3 inowanikwa muzita reBook application, iro rakadaidzwazve kuti iBooks, senge iri yazvino vhezheni yeIOS 11.
Parizvino zvinoita sekunge tichazomirira yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.3, sezvo vakomana veCupertino vachangotanga beta yechina yeiyi yechitatu yekuvandudza kuIOS 11.
Pfungwa nyowani yeIOS 12 inoratidza kuti tingaite sei kugadzirisazve FaceTime, kuva Siri pasiri pasiri uye kushandisa Face ID kuvharira kunyorera, pakati pezvimwe zvingasarudzwa.
Vakomana vanobva kuCupertino vamira kusaina iyo iOS 11.2.5 vhezheni kuburikidza nemaseva avo, kuitira kuti isu tigone kudzikisira kuIOS 11.2.6
Apple yakatumira mavhidhiyo mashanu matsva pane yayo YouTube chiteshi. Zvina zvacho zvinobva kumushandirapamwe wayo we "Chinja", uyo unotarisira kugonesa vamwe vashandisi vefoni kuti vachinjire kune iyo iPhone.
iOS 11.3 ichave yakaoma zvakanyanya ne USB-yakabatana zvishongedzo
Zvinhu zvinoomarara zvakare neIOS 11.3, sezvo kambani yeCupertino yakawedzera chengetedzo painoshandisa USB zvishongedzo.
Beta yechitatu yeIOS 11.3 inotipa sechinhu chitsva kutsakatika kweAirPlay 2 basa, basa rinotibvumidza kuburitsa zvimwechete pazvinhu zvakasiyana.
Apple yakaburitsa vhezheni itsva yeIOS 11.3, yechitatu Beta, iyo parizvino inongowanikwa kune vanogadzira. Tinokuudza iwe nhau.
Vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa inogadziridza ese masisitimu anoshanda avanokwanisa kugadzirisa dambudziko nechiratidzo cheTelugu chakatangazve chishandiso uye chakaratidza matambudziko anoshanda
Svondo rapfuura homba nyowani yakaitwa yeruzhinji muIOS iyo yakabata vese vashandisi vakagamuchira ...
Iko hakuna nhau dzepamutemo parizvino, asi zvese zvinoratidza kuti WWDC 2018 ichaitika kubva munaJune 4-8, 2018 kuMcEnery Convention Center muSan Jose.
Chinhu chekutanga kutaura ndechekuti iguru ratosimbiswa naApple pacharo uye kuti mukufunga kwete ...
Kuwedzera Kwechokwadi iri ramangwana. Apple inoziva izvi uye iri kushanda kukuunzira mimwe mhinduro. Zvichakadaro, inovhura webhusaiti nyowani yeARKit pane iOS
Chirevo chitsva chinobva kuBloomberg chinotaura nhoroondo dzipi dzatinogona kuona muIOS uye chii chingave chinonoka kutarisisa kugadzikana uye kugadzirisa bug.
Sezvinosimbiswa zviri pamutemo naApple, kudonha kweiyo iOS 9 boot kodhi hakuise njodzi kune chengetedzo yazvino vhezheni yeIOS
Apple ichangobva kuburitsa yechipiri Beta yeIOS 11.3, inotevera inotevera yekuvandudza kune iOS 11 iyo parizvino inongowanikwa kune vanogadzira.
Apple yakasarudza kuisa rumwe ruzivo nekungotarisa nezve izvo zvaticha gadzirise.
Iyo ID yeApple inogona kukubvumidza iwe kuwana kune mamwe mapato echitatu-bato, ichikuchengetera iwe kunyoresa nguva. Izvi ndizvo zvakawanikwa mukodhi yekodhi yeiyo iOS 11.3
Vhiki rino tinoongorora runyerekupe rwekuti Apple yakafunga kunonoka nhau dzayo hombe dzeIOS 12 kusvika 2019 kuti itarise pane kuita.
Vakomana vanobva kuCupertino varega kusaina iOS 11.2, iOS 11.2.1 uye iOS 11.2.2, kuitira kuti tirege kuzodzikisira pasi kutora mukana wekufungidzira kwekutongwa kwejeri uko mune dzidziso yave kuda kubuda.
Iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.3 inozopedzisira yabvumidza kushandiswa kweFace ID kubvumidza kutenga kwekutenga kunoitwa kuburikidza neMhuri basa.
Iyo tsika kuti muWWDC yega yega tinoona kufambira mberi kwemaitiro matsva ekushanda kwegore rino. Saka ...
Mushure memwedzi mishoma yekukakavara kwesoftware bugs, Apple inoita kunge yakatsunga kutarisisa mashandiro uye inganonoka imwe nyowani iOS 12
Iwo ekutanga betas eIOS 11.3 uye tvOS 11.3 inopa rutsigiro ruzere rweAirPlay 2 uye yakawanda-kamuri yekutamba, iri rekupedzisira basa rinotibvumidza isu kutamba zvakafanana zvirimo pane ese HomePods mumba medu.
Apple yakawedzera iyo Messages muICloud sarudzo mune yekutanga beta yeIOS 11.3 mushure mekumurega basa mune yekutanga shanduro dzeIOS 11.
Apple yatanga iyo Beta yekutanga yeIOS 11.3 neshanduko dzakakosha senge itsva Animoji uye kugadzirisa mune bhatiri manejimendi, pakati pevamwe.
Apple inoburitsa iOS 11.2.5 isina bhatiri maneja trace
Apple ichangoburitsa iOS 11.2.5 uye isu hatina chiratidzo chevatsva manejimendi manejimendi kugona kwavakafunga.
Zvinoenderana neazvino manhamba ekugashira eIOS 11, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti iyi vhezheni yeIOS ichave neyakaipisisa mareti ekurera kana vhezheni inotevera yeIOS yaburitswa
Tichakwanisa kuona hutano hwebhatiri redu uye kugadzirisa mashandiro mune ramangwana kugadzirisa
Tim Cook akasimbisa kuti Apple ichagadzirisa iyo iPhone bhatiri uye yekuita nyaya mune iri kuuya yekuvandudza.
l Mugwaro rakavandudzwa kana gwaro rekuchengetedza reIOS 11, Apple inowedzera ruzivo rwese pamisoro dzakasiyana ...
Uye isu tinoenderera mberi neshanduro dze beta dzakatangwa neApple kuvandudza mashandiro ayo eIOS 11, mune ino kesi isu tine ...
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Zvinotaridza kuti Apple yatanga kuvhara mukana wekusaina vhezheni pamberi peIOS 11 mune vamwe ...
Masikati beta beta shanduro dzevagadziri veakasiyana Apple OS. Mune ino kesi isu tine ese mavhezheni ...
Apple inoburitsa iOs 11.2.2 kugadzirisa Meltdown uye Specter chengetedzo zvikanganiso pamwe nezvimwe zvekuchengetedza zvikanganiso pane inotsigirwa iPhone, iPad, uye iPod Touch.
Apple inoburitsa yekuvandudza beta shanduro dzeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, uye tvOS 11.2.5
Zvinotaridza kuti zvinhu zvese zviri kudzoka zvakajairwa zvishoma nezvishoma mushure memazuva mashoma ezororo reKisimusi mu ...
Teregiramu X, yakanyatsogadziriswa uye yakakosha kune iyo iPhone X
Teregiramu inovhura app nyowani "Teregiramu X" yakanyatsogadziriswa uye nekukurumidza uye iyo inogona zvakare kugadziridzwa nematema erima akakodzera iyo iPhone X